The 192.168.1.1 - 192.168.ll Ny adiresy IP no toerana misy anao indrindra ho an'ny modem ADSL miampy modem miampy Wi-Fi Routers ankoatry ny Routers ilaina. Ny adiresy IP adiresy izay tena fahita matetika toy ny adiresy mpampiantrano dia ampiasaina mba hidirana ao amin'ny router, ankoatr'izay ny fametrahana ny modem. Ny IP toy izany dia hampiharina amin'ny IP default amin'ny alàlan'ny orinasa '192.168.0.1 na 10.0.0.1 admin router router.
Fomba hidirana amin'ny IP 192.168.1.1
Ny teknikan'ny lakile hiditra ao amin'ny adiresy IP dia ny fitehirizana azy amin'ny tanana amin'ny browser. Tokony hisambotra fotsiny ianao https://192.168.1.1 ao amin'ny browser ary tsy isalasalana fa hiditra amin'ny adiresy IP ianao.
Ny ankamaroan'ny besinimaro dia tsy misy olana amin'ny fidirana amin'ilay interface. Hampahafantatra anao ny ankamaroan'ny mpanjifa fa manomboka ny fahasahiranana lehibe raha mamporisika anao handefa ny passkey-nao. Na dia maro aza no tsy manana ny tendrony momba ny passkey dia ny sasany kosa mametraka mahitsy ny PW tsy misy antenaina. Ahoana ny fampiharana izany 192.168.l.1 na 192.168.1.1
Fomba ampiharana izany 192.168.l.1 hafa 192.168.1.1
Tsindrio mazava tsara ny https://192.168.1.1 avy eo tsy ny https: //192.168.l.1 ao amin'ny baran'ny adiresy browser izay ho tsikaritra eo an-tampony dia fidirana fidirana. Raha ny IP default dia 192.168.1.1 tsy an'ny router modem hafa dia manamafy fotsiny ilay bokikely torolalana hahitana ilay toerana sy toerana misy ilay IP. Androany hanombohana ny pejin-tranonkala dia ho hitanao ny efijery fidirana misy solonanarana avy eo boaty PW. Raha sambany mitady ianao dia azonao atao ny mampiditra fotsiny ireo takelaka fidirana default voalaza ao amin'ny bokikely modem / router.
Fikarohana IP Router
Araho ny torolàlana hijerena ny IP router avy amin'ny solosainao findainy.
Mifikitra amin'ity làlana ity
Atomboka - Fandaharana rehetra - Fitaovana - Baiko avy hatrany.
Noho izany ao amin'ny fidirana fikandrana maika eo ambanin'ny baiko etsy ambany dia mifandimby aorian'ny iray
Mety hitanao ny zavatra toy izao:
Ka eto no misy ny default 192.168.1.1 IP na dia miseho toa ny 192.168.l.1 aza izany
Mandehana any amin'ny terminal. Vao mahazo azy amin'ny solosaina finday fotsiny ianao na amin'ny fitsapana azy ao anaty boaty fikarohana.
Fampiharana voadona - Fitaovana amin'ny rafitra -Terminal
Aorian'ny fanombohan'ny terminal, makà baiko etsy ambany
IP mazava ho azy grep default
Ny baiko toy izany dia hanolotra anao toy izao vokatra izao
Noho izany dia ho hitanao indray fa ny rafitra dia manome ny adiresy IP default 192.168.ll an'ny Macintosh OS
Mampiseho ny adiresy IP default a router an'ny 192.168.l.1
Na izany aza ny fanamarinana ireo zavatra ireo imbetsaka dia very hevitra ny mpanjifa rehefa manana fifandraisana Wi-Fi maromaro izy ireo ary hahazoana antoka fa miray amin'ny router marina ianao dia manandrana tsotra & miala amin'ny router dia jereo izay famonoana famantarana ary niverina indray.
Raha te hanova ny adiresy IP ao anaty ny router ianao dia soraty fotsiny ilay IP misy anao ao anaty browser. Afaka angatahina ianao izao hanoratra passkey & solonanarana. Mety ho hitanao ao amin'ny bokin'ny gadget izany. Hisokatra avy eo ny fanohanan'ny router ny router.